Maareynta Shaqooyinka ee Dubai C-Level ma ahan oo keliya kharashyada
Maareynta Shaqooyinka ee Dubai Tusmada loogu talagalay Xirfadda C-Level
Shaqooyinka kalkaalinta caafimadka ee Dubai iyo Abu Dhabi
Waxaa laga yaabaa 6, 2018
Shaqooyinka maareynta ee Dubai
Shaqooyinka maaraynta ee Dubai ma ahan oo keliya dadka ajnabiga ah. Shirkadda Dubai City hadda waa caawinta maamulayaasha in lagu meeleeyo UAE. Kooxdayadu waxay maareeyeen tilmaamaha oo dhan ee shaqooyinka Dubai loogu talagalay maareeyayaasha. Gaar ahaan agaasimayaasha maamulka sare. Marka hadaad shaqo raadin ka raadineyso Imaaraadka Carabta. Bal fiiriya dhawr talo, oo soo hel meesha ugu fiican si aad u hesho shaqo riyo dibadda.
Waxaanu qoreynaa shaqooyinka ugu fiican ee aad ka heli kartid UAE. Dabcan, kuwa ugu fiican ayaa ah Maamulaha ama Fursadaha Xirfadaha Shaqaalaha Sare. Shirkaddeena ayaa hagaysa qurba joogta sida loo helo shaqooyinka noocaas ah. Dhanka kale, shaqooyin noocee ah ayaa ah taasi?. Iyo sida loo maareeyo maanka saxda ah ee shaqooyinkaan la soo bandhigo ?. Shirkadda Dubai City waxay gacan ka geysataa shaqaale cusub. Maxaad u akhridaa hagidkayaga. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah shirkadaha wanaagsan ee hoos ku qoran. Waxay qabtaan shaqooyin wanaagsan oo ka socda Dubai iyo Dalalka Gacanka.
Shirkaddayadu guud ahaan waxay u muuqataa inay la hadlayso kaa caawin doona inaad noqoto maamule sare oo ku yaal UAE. Dhanka kale, waxaan ka caawineynaa qurbaha sidii ay ku heli lahaayeen shaqo dhakhso badan oo ay ku fakaraan. Tilmaamahan, waad sameyn doontaa hel macluumaad wanaagsan oo ku saabsan qorista. Waqtigan xaadirka ah dalalka Bariga Dhexe iyo Gacanka ayaa ah a meesha ugu sareysa ee shaqo doonka. Gaar ahaan kuwa leh aqoonyahano aqoon sare leh oo leh MBA iyo maamulka maaraynta ganacsiga. Marka hoos ka daawo muuqaal, waxa waxaad ku sameyn kartaa hageheena.
Shaqooyinka CEO ee Dubai
Inaad haysato jago sare had iyo jeer way ka fiican tahay ?. Jagada maamulaha waa xamaasad, maaha shaqo. Runtii taasi waa wadahadal in lagu noqdo maamule sare ama maya? Inta badan maamulayaasha heerka dhexe waxay go’aansadaan inay si aad ugu dallacdo shaqada tababare heer sare ahl. Shaqooyinka CEO-ga waxay u fiicanyihiin dadka haysta tacliinta MBA iyo kuwa leh PhD. Sababtoo ah shirkadaha waaweyn ama shirkad yar. Dhab ahaantii iyaga oo dhan haysta CEO. Markaa shirkad dhexdhexaad ah ayaa rajaynaysa in shaqaale badan oo ka shaqeeya madaxda sare. Ma jiro wax caalami ah runtii ku jirta blogkan Dubai, dadku marnaba ma ogaan karaan cida noqonaysa hoggaamiyaha ugu fiican.
Tusaale ahaan, dhowr dalxiis oo ku yaal Bariga Dhexe ayaa cilmi baaris ah jeegaree mushaharka CEO ee Dubai. Mushaharka badan ma markasta wuu ka fiican yahay ?. Dabcan waa maadaama ay runtii tahay inaad sameyso wadahadal laga yeesho goorta la go'aaminayo haddii in lagu sii wado shaqada shirkad weyn ama urur yar ama dhexdhexaad ah. Shaqada Maareeyaha waa adag tahay in la gaaro, in ka yar 5% dadka maareeya si taas loo sameeyo.
Ma jirto xaqiiqda guud ee ku saabsan mawqifka guud. Waxaa jira faa'iido iyo faa'iido daro si ay u doortaan shaqaalaha kalkaalisada illaa heerka sare. Saacadaha dhaadheer ee shaqada, jimicsiga gaarka ah iyo sirdoonka bulshada ayaa loo baahan yahay. Marka qof kasta ma noqon karo maamule sare. Gaar ahaan haddii aysan ahayn haysashada warqad ku haboon. Waxaa jira geesinimo iyo xaraarad loo baahan yahay booskan gaarka ah. Dadka intooda badani waxay ku socdaan heerarka maamulaha dhexe.
Muxuu Maareynta Shaqooyinka Dubai?
Muuqaalka No.1 Shaqooyinka Dubai ee Saameynta
Shaqooyinka maareynta maalka, dhab ahaantii, waxay inta badan ku jiraan shirkadaha waaweyn laga bilaabo Abu Dhabi ilaa Dubai. Iyo badankoodna waxaa jira sabab. Iyada oo loo marayo guusha iyo kobcinta kordhay, maamulayaasha dhexe. Helitaanka shaqo sida macalimiin sare. Iyadoo shirkadan yaryar ay noqoto mid ka ballaaran waqtigaas. Ka dibna maamulayaashu waxay helayaan mid gaar ah faa'iidooyinka iyo dusha sare ee suuqa shaqada.
Shirkadda Dubai City oo faahfaahsan tilmaame loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Waxaan soo saarnay dhowr waxyaalood oo ay tahay in laga fiirsado oo ku saabsan sii wadida shaqada tababare ahaan ee jago maamule sare. Arinta ugu weyn ee shaqooyinka maamulka ee Dubai waa helitaanka khibrad heer sare ah. Waxaad u isticmaali kartaa khibradaada wanaagsan ee shaqo raadinta mustaqbalka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsan shaqooyinka maamulka ee Dubai waa mushaar fiican. Iyo in ka badan koorsooyinka wanaagsan iyo si fiican u dhigan calaamad shakhsiyeed sida dalxiis. Marka, haddii aad raadinayso shaqada noocaas ah waa inaad awoodi kartaa inaad hesho gunooyin badan. Maamule ahaan waxaad heli doontaa saacad dheer oo shaqo laakiin waad maarayn kartaa isku xirka wanaagsan. Shaqooyinka aasaasiga ah ee banaan shaqooyinka sida Xirfadda hotelka ilaa Xirfadda MBA ee UAE. Dhammaantood waxaad awoodi doontaa inaad hesho Maamulaha Sare ee Bariga Dhexe.
No.2 Dhismaha Hogaamiyaha Hogaamiyaha Dubai
Inaad galiso shirkad weyn oo ah shaqo maamul, tusaale ahaan, Shaqooyinka garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi iyo Dubai. Dhab ahaantii waa sida qayb ka mid ah mashiinka shaqada ee weyn oo hor istaagay imtixaanka waqtiga. Dhab ahaantii si aad u hesho shaqo maamul Dubai. Waxay qaadan doontaa waqti dheer. Sababtan awgeed, kooxdayadu waxay leedahay Hagaha dhaqaalaha cusub. Badiba waayeelka maareynta waayeelka intooda badanaa waxaa la dhisay wakhti dheer ka hor.
Si aad u noqoto maareeye Dubai. Waa inaad gaadhaa qaar ka mid ah shuruudaha. Iyo waxyaabo kuu suurto gelinaya inaad si sax ah u ogaato waxa shaqadu tahay, sida aad ugu haboonaan karto xirfaddaada waaxdaada iyo jidadka cad ee kor u kaca iyo kor u kaca sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu socotid albaabka. Inkasta oo qaabkani uu yahay qaabka saxda ah ee qof kasta, haddii aad rabto shaqo oo leh dareen xoog leh oo xasilooni ah, oo si cad loo qeexay loona qaabeeyey habka horumarinta, ka dibna shirkadaha waaweyn Kuwaan kuwan xayawaanka.
Sidoo kale, haweenku hadda waxay shaqo ku heleen Dubai. Waxba ma laha waxa hab nololeedkaaga. Xaqiiqdii waxaad fursad wayn u leedahay helitaanka shaqo Bariga Dhexe.
Maya 3 Faa'idooyinka Macaamilka Muujinta ee UAE
Guud ahaan, shirkadaha waaweyn ayaa u muuqda lacag uruurinta maalgelinta. Sidaas darteed waxaa jira fursado weyn oo loogu talagalay madaxda sare ee heer dhexe. Ugu weyn faa'iidooyinka aad ku noqon karto maamul gudaha UAE waa soo bandhigid caalami ah. Sababtoo ah shirkadaha caalamiga ah ee wanaagsan ayaa bixiya waxtarka sida caymiska caafimaadka. Dheeri iyo xiiseyn gudaha ah tababarka dadka cusub.
Maadaama aad tahay maamulaha sare, waxaad helitaanka gunnada gaadiidka ama Uber. In kabadan miisaaniyada tababarka, iyo faa'idooyin kale oo badan. Tani waa sababta oo ah shirkadaha waaweyni waxay badanaa leeyihiin dakhli ka weyn kuwa shirkadaha yaryar. Sidaas darteed maskaxda ku hay, shirkadaha sameynta u fududeynaya shaqaale cusub inuu noqdo kormeere. Dhanka kale, uma baahnid inaad awoodid inaad iska bixiso kordhinta xirmooyinka gargaarka.
Dabcan, tani waxay kaliya ku xirantahay markaad bilowdo inaad ka faa'iideysato booskaaga. Waxaa jira waxyaabo badan oo la heli karo faa'iidooyinka loogu talagalay maamulayaasha bangiyada ee UAE. Iyadoo aan loo eegin shirkadda iyo waxa dibedda ama gudaha ah waxaad ku dhamaaneysaa inaad tagto noloshaada shaqooyinka heerka C-da. Waa inaan xasuusano maamulayaasha Imaaraatka. Xaqiiqdii waxaad shaqo ka heli kartaa meelo kale, tusaale ahaan, Saudi Arabia, iyo Qatar. Markaa maadaama aad noqotay madaxa fulinta ee Dubai ama Abu Dhabi. The adduunka ayaa kuu furnaan doona.
Maya 4 Suurtogalnimada Meel Dheeraad ah ee Isbedelka Shaqada
Inkastoo doorkaagu uu noqon karo shirkado aad u gaar ah shirkad weyn. Inaad raadsato shaqo sida Agaasimaha Guud ama Agaasimaha Maamulka waqti ayey qaadan kartaa. Xaqiiqdii, way fududahay in boosaska laga badalo heerka Maamulka. Dhinaca kale inta badan maamulayaasha dhexe ee raadinaya sahmi meelaha cusub ee shaqada adigoon ka tagin shirkadda gebi ahaanba. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, adiga oo shaqaale ah waxaad heli doontaa waxbadan suurtagalnimada isbeddel shaqo.
Si aad u noqotid a CEO, waxaad ka geli kartaa inaad noqoto madaxa fulinta inaad noqoto maamulaha mashruuca, ka dibna hawlgal Agaasimaha oo gaadhay shaqooyinka C-Level. Ama xitaa waxaad bilaabi kartaa sida naqshadeeyaha garaafka iyo kor u kac ka shaqeynta sida badeeco sare. Weli waxaad u baahan tahay inaad wax ugaadhsato waxoogaa isbeddel ah. Iyo si adag u shaqeeyaan meel hoose hoose sanado badan.
Sababta oo ah inaad u qalanto isbedelka shaqada aad rabto. Xaaladaha badankood way qaadan doonaan ugu yaraan 10 sano si loo gaaro. Laakiin xaqiiqdii waa dheeri haddii aad mar horeba uga shaqaynaysay hay'ad wanaagsan. Intii laga hormarin lahaa maamulka shaqooyinka Dubai. Taasi waa hal shay oo maamulaha ugu fiican ay ka walwalaan. Dhanka kale, shaqooyinka maaraynta ee ka jira Dubai ayaa ka badan waajibaadka fudud.
No.5 Shirkadaha cusub iyo bilawga
U shaqeynta shirkad weyn maahan qoraxda iyo roob-mareenka. Si kastaba ha noqotee, u shaqeynta shirkadaha bilowga leh faa'iidooyinkooda. Tusaale ahaan, tan iyo markii aad u guurtay shirkadda Dubai laga bilaabo meele-bilaabista illaa ganacsi wanaagsan. Waxaad yeelan doontaa koontorool buuxda oo ah hannaan wada shaqeyn ah sida shirkadu horumarinayso. Waa maxay horumarinta waax kasta? Iyo xitaa inta ay shaqaaluhu kuu diyaarinayaan bil kasta.
Iyadoo laga yaabo in lagu jirrabo inaad gasho shirkad weyn oo caalami ah. Waa inaad tixgelisaa shirkadahaan yaryar. Ama xitaa ururada bilowga ah ama shirkadaha maalgashada maalgelinta. Shirkadda ugu fiican si aad shaqo u hesho shirkado cusub oo shirkad ah sida Angelimo. Shirkadan ayaa shaqaaleyneysa aduunka oo idil!
No. 6 C-Level Changes ayaa si tartiib ah u dhacay
Miyay rajeyneysaa inaad noqoto fuliye C-Level? Ka shaqeynta shirkad weyn waa fiican tahay. On dhinaca xun, heerka dhexe ilaa Heerka C-da waa dariiq dheer. Sababta oo ah kuwa fuliya C-Level isbeddeladu aad ayey u dheeryihiin. Waxaad ubaahantahay inaad samir yeelato, go'aanada qaar waxay qaadanayaan ilaa 3 Sanadood. Xitaa shirkadaha qaar ee Dubai. Wali waa wado dheer horay u soo bandhigeen dadka ajnabiga ah ama shaqaalaha deegaanka si ay u bilaabaan heerka maamulka ee UAE.
Xitaa haddii shirkadda aad u shaqeyso ay u furan tahay fikradaha cusub. Hadana, waxaad ubaahantahay inaad hadaf fog leedahay. Aad xirfad horumarineed oo wanaagsan iyo qancinta waaxda agaasimayaasha HR inay u guurto nooc kale. Iyo la socosho si ay kuugu qaadato istiraatiijiyad cusub. Oo booskaaga beddel heerka heerka fulinta C-Level, dallad cusub oo loogu talagalay boos cusub ayaa waqti badan qaadan karta. Qaar badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha cusub ee Imaaraadka Carabta wuxuu doonayaa inuu ka tago calaamadooda shirkadda. Laakiin tani waxay qaadataa waqti badan, waxay u shaqeeyaan ugu yaraan 5 illaa sanadaha 7.
Si kastaba ha noqotee, tani waa laga yaabaa noqo mid toosan waana u fududdahay shirkad ka yar midka weyn. Waa inaad xasuusataa maadaama ay shirkaddu in muddo ah jirtay, waxay lahaan doontaa qaabkeeda wax looga qabto. Sidoo kale kaliya si loo dardar geliyo geedi socodka oo dhan oo aad awoodid raadso socodka wareysiyada ee Dubai.
Maya Maamuleyaasha Xawaaladaha Xogta ah Saameynta Your Success
Waa hagaag, maareeyayaashu had iyo jeer waxay eegayaan inay noqdaan kuwo saameynaya. Inta aad naftaada ku hareeraysan tahay dad wanaagsan oo ka kala yimid adduunka oo idil. Cadaadiska kale wuxuu kaa caawinayaa inaad guusha gaarto. Arrinta ugu weyni waa adiga dhiirigelin guul iyo farxad. Weligaa ma ogid sida ay u adkeysaneyso isu dheellitirka shaqada-nolosha heer wanaagsan. Dhinaca taban maahan Maareeye kasta oo jooga Dubai inuu noqon karo go'aamiyay in ay helaan shaqooyinka CEO. Dadka qaar waxay muddo dheer la shaqeeyaan koox aan hawl lahayn. Oo waxay ku bixinayaan qiimo aad u badan. Sababtoo ah fikradaha noocan ah waxay hoos u dhigeysaa tayada shaqada aad shaqeyso.
Maadaama aad bilowday inaad la shaqeyso dadka leh fikrad xun. Dhab ahaan ku dheji saacado dheeraad ah wax dhib ah sida aad u shaqeyso. Laakiin adigu maareeye ahaan waxaad ubaahantahay inaad noqotid firfircoon oo aad masiirkaaga lahaatid. Xaqiiqdii, taasi saameyn ayey yeelan doontaa fursadahaaga inaad ku dhex guurto shirkadda dhexdeeda. Soo ururi warbixin wanaagsan koox. U ogolow iyaga inay kordhiyaan anshaxa shaqada iyo dadaalka maxaa yeelay waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Xaqiiqdii, hadaad sameyso shaqada gurigaaga. Kooxdaada ama waaxdaada hoos timaada kormeerahaaga. Waan ku soo kicin doonaa oo kuguma soo dejin doono meel uun.
Waxaa jira waxyaabo badan oo la heli karo shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Saamayntu waxay kaa caawin kartaa inaad shaqo fiican hesho. Maareynta guushaada ayaa run ah waxay ku saabsan yihiin inay saameyn ku yeeshaan qof kale inuu ku shaqaaleysiiyo.
Gabagabaynta Maareynta Maareynta Shaqooyinka Dubai
Haa, aan ku dhameyno, maamulka maareynta Dubai. Ma fududa in la helo. Inta badan dadka shaqo doonka ah waxay u baahan yihiin xirfad sax ah. Iyo shaqooyinka C-Level sida Maareynta Hawlaha, Maamulaha, Meelaha Maamulka Maareynta. Wareysiga waa mid aad u adag. Iyo beddelashada deegaanka weligeed ma noqonin wax fudud. Xitaa haddii waddan la beddelo waxay noqon kartaa hawl culus in aadan u maarayn doontid qaab togan. Gaar ahaan laga bilaabo Yurub or Asia sida shaqo raadiye Bariga Dhexe.
Sidaas awgeed, way ka fiicantahay in la bilaabo shaqooyinka heerarka galista. Kadib tartiib tartiib ugu dhaqaaq booska maamulaha dhexda. Sidan way kuu sugnaan doontaa. Dabcan shirkadaha sida Google iyo Facebook. Guud ahaan marka laga hadlayo, ka dib marka aad gudubto nidaamka wareysiyada, iyo haddii aad ahaan doontid loo xilsaaray shaqadan farxad leh. Waxaad samayn doontaa lacag badan. Laakiin helitaanka meesha waa adag tahay, tani waa sababta ugu badnaan dadka sii joogaya shaqeeyaan ilaa ay horumar sameeyaan.
Laakiin Shirkadda Dubai City had iyo jeer waxay dhiirigelisaa qurbaha. Waxaan rabnaa in lagu meeleeyo fursadaha shaqo ee ugu suurta galka badan iyo shaqooyinka maamulka ugu wanaagsan ee ka jira Dubai. Tani waa sababta aan had iyo jeer u cusbooneysiinno cinwaanka bartayada ku taal UAE. Iyadoo tanna maskaxda lagu hayo, waxaan isku dayeynaa si lagaaga caawiyo inaad ku faraxdo inaad ku shaqeysato Bariga Dhexe. Dhanka kale, ha iloobin in sidoo kale shirkadaha jooga Sacuudi Carabiya shaqaaleysiistayaal.
Shirkadda Dubai City hadda iyadoo la siinayo hagitaan wanaagsan oo ku sugan Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.
Cinwaanka Xayeysiinta WhatsApp:*